မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ၆၂=ပါး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ၆၂=ပါး
ယခုပို့စ်အား ကူးယူသွားပါကြောင်း (သူများကို ဆရာကြီး ပြန်လုပ်ဖို့ .. )
ကျွန်တော် စာဖတ်သူတွေကိုပြောချင်တာက ဒီလောက်မကဘူး…ဒါထက်ပိုပြီးကို အားရှိပါးရှိပြောချင်တာ။
ကိုတောက်တဲ့ နားလည်မှုလွဲတယ်ထင်ပါတယ်…ကျွန်တော်ပြောတာက ကိုတောက်တဲ့ပြောတဲ့စာကို အဓိကမပြောပါဘူး… ကိုတောက်တဲ့တို့ခုလိုအားပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုတ်တာပေါ့ ဦးပေရေ…ကျွန်တော်တို့ ဗွီဒီယို မြန်မာကားတွေမှာ သရဲကားတို့..သေရင်ဝိညာဉ်လေးထွက်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ မရိုက်ရဘူးမှတ်တယ်။ လူသေရင် ၀ိညာဉ်လေးထွက်သွားတာမျိုးတွေကိုရိုက်တာက ကုလားကားတွေများပါတယ်။ အဲဒါ ဘာသာရေး ရဲ့ပင်ရင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Oo Oo ရေ… အာမခံထားရင် အနေခက်တယ်ဗျာ….
ငါကတော့ မိစ္ဆာဒိဌိ အပါး ၆၀ လောက်ဖြစ်နေမလားပဲ ဟီဟိ။ ဗဟုသုတရပါ၏။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကိုဝေးလွင့်တိမ်ရေ…ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ဒီအယူတွေကလွတ်ရမယ်ဗျနော်…
လူတော်တော်များက ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်တဲ့ ဘာသာအတွက် အသက်ပေးလိုက်မယ်..တို့.. သေရဲတယ်လို့ ပြောတတ်ကြတယ်။ အဲဒီလို အသက်တာပေးရမှာ မကြောက်တာ…ကိုယ့်ဘာသာက ပေးတဲ့အသိ သူတို့မှာ တကယ်က ဘာမှမရှိကြရှာကြဘူး။
ကျွန်တော် နားလည်တာတစ်ခုကတော့…. ဘာသာတရားက လူသားတွေအတွက်..လူသားတွေငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ရှိနေရတာပဲ။
လူသားတွေက ဘာသာတရားအတွက်ရှိနေရတာ မဟုတ်ဘူး။
ဘာသာကောင်းစားဖို့ လူသားတွေက ထောက်ကူထားရမှာ မဟုတ်ဘူး။
အချစ်ဦးနဲ့အနှစ်ဦးရေ…. လေ့လာရုံတင်မရပ်ပဲ… မှတ်သားတဲ့အဆင့်ထိရောက်ဖို့ ကျိုးစားနိုင်ပါစေဗျာ…
အန်တီအေး ပြောတဲ့ စာအုပ်လေးတွေ ရှာဖတ်ကြည့်အုန်းမယ်။
အန်တီအေးရေ…ကျေးဇူးပါဗျို့..ကျွန်တော် ကြိုစားပြီး ရှာဖတ်လိုက်ပါဦးမယ်…
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ၆၂ ပါးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိခွင့်ရတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြားဖူးတာကတော့ အဲဒီဒိဋ္ဌိ ၆၂ ပါးဟာ ကျွန်တော်တို့ပုထုဇဉ်တွေမှာ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမလွတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့။ အရိယာဖြစ်မှ ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာလို့ဆိုပါတယ်။ ဒီ ၆၂ ပါးထဲက နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ(အကျိုးနှင့်အကြောင်းကိုပယ်) ကတော့ ငရဲတန်းကျနိုင်ပါတယ်တဲ့။
Pye Kun Zaw ရေ….
ဦးခိုင်ရေ…. ဦးခိုင်ရဲ့ အတိုဆုံးတင်ပြမှုဟာ အတော်ထိရောက်ပါတယ်။
ဟဲဟဲ…မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ တပါးထပ်တိုးလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ…ရေ့ဘ၀ နောင်ဘ၀ အမြင်တွေအသစ်ဖြစ်ရင်တော့ တိုးချင် တိုးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဦးပါ ခုလို ၀င်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့အတွက် အတိုင်းမသိဝမ်းသာရပါတယ်ဗျာ..
– ကိုခိုင်ရဲ့ တယောက်ထဲ.. သုံးကိုယ်မခွဲပါနှင့်..
(သူတို့ကတော့ စာလိုပေလို နောက်ဘ၀ကို သတ္တိနဲ့ ကူးတယ်လို့ ကတ်သိကတ်သတ်ယူပြန်ကြတယ်..
ဦးဦးပါလေရာရဲ့ အမြင်သဘောထားနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားသွားပြီဗျာ။
ခု..ကျွန်တော်တို့ကို ဘုရားက မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ..အယူမှား ၆၂=မျိုးထုတ်ပြခဲ့တယ်။ အဲဒီအယူမှားတွေကို ကျွန်တော်တို့ စွန့်လွတ်ကြရမယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရားကမမှန်ဘူးဆိုလို့ စွတ်လွတ်တာမျိုးတောင် မဖြစ်သင့်ဘူး။ ကိုယ်တိုင်လဲ လေ့လာကြည့်သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ အဲဒီအယူတွေဟာ လူတွေကို ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေပြုလို့လဲ…လူကိုကောင်းကျိုးမပြုတဲ့အယူတွေမို့စွတ်လွတ်တာမျိုးထိဖြစ်သင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ ယူဆတယ်။
” ရင်ဝလှံဆူး ထိပ်ဦး မီးလောင်တာကို မြန်မြန် မငြိမ်းသတ်ဘဲ…ဒီလှံနဲ့ မီးရှို့တဲ့ လူရဲ့နာမည်ကို
လေ့လာစုံစမ်ပြီး ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုတာသိမှာ မီးငြိမ်းသတ်မယ်ဆိုရင် အသက်သေဖို့ဘဲ
ကိုအောက်ရဲ့ မန့်လေးကလဲ ကျွန်တော်အတွက် ဗဟုသုတ တိုးစေပါတယ်ခင်ဗျာ….
အလင်းဆက်ရေ….ကျွန်တော်လျှောက်လှမ်းနေတဲ့လမ်းမှာ… အမြဲတမ်းအလင်းရောင်လေးဆက်ပေးနေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်သတိရနေတယ်လို့ပြောချင်တယ်နော်။
ဟ ဦးဇောက်ရ တစ်နိုင်ငံလုံး လွတ်မှ လွတ်ပါ့မလား။
ဟဲ့ မိညာရဲ့… လွယ်လွယ်နဲ့စပါယ်ပွင့်ချင်လို့တော့ ဘယ်ရမှာလဲ…
မမ အညာသူရေ နားမလည် လို့ရှိရင် တရားစခန်းဝင်ပါ ကျွန်တော်ကတော့ သင်္ကြန်တွင်းတိုင်း မိုးကုတ်ဝိပသနာ အဖွဲ့ခွဲ ၂၇၆ ဆပ်သွားဖူးကျောင်းမှာရှိပါတယ်။ အပေါ်မှာ ဆရာ့ ဆရာကြီးတွေ ရေးထားတာလဲ ပြည့်စုံသလောက်ရှိနေပြီမို့ ထပ်မရှင်းပြတော့ပါဘူး
ဒိဋ္ဌိ ၆၂ ပါးကလွတ်အောင်
phanng phaung..ရေ…. ကမ္မဿကတာ သမ္မာဒိဋ္ဌိ..ကို မြန်မာလိုအရင်ပြောမယ်နော်…
Thu wai ရေ….ခုလိုဝင်ရောက် အားပေးသွားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
အန်တီအေး ခုလိုရေးသားတင်ပြမှုအတွက် ၀မ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ…